अर्थ Archives - Page2of3- Bagaicha.com
पश्चिम सेती आयोजना अझै अन्योलमै……….
१० फागुन, काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज आफ्ना पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार पर्खेर बसेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै कम्पनीको टोली काठमाडौं आउने लगानी बोर्डलाई जानकारी दिएको छ । विद्युत प्राधिकरणसँग डलरमा हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा चित्त नबुझेको बताउँदै थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माण शुरु गरेको छैन । नयाँ सरकारब...
०१ फागुन २०७४, सिन्धुपाल्चोक – अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङमार्ग एक महिनाभित्रै ‘ब्रेक थ्रु’ हुने भएको छ । जतिसक्दो चाँडो आयोजना सक्ने तदारुकता र लक्ष्यमा अन्यथा नभए मेलम्चीको पानी पिउने उपत्यकावासीको दुई दशक लामो सपना असारभित्रै पूरा हुने देखिएको छ। बाँकी दुई सय ६० मिटर खनेपछि साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुनेछ,’ आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक भ...
२८ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकार पछिल्लो समय निकै ‘दानी’ देखिएको छ । हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता, शहीद घोषणा वा कुन न कुनै बहानामा आर्थिक सहयोग दिने निर्णय भटाभट गरिहेको छ ।शुक्रबार त रक्षामन्त्री भीमसेन दास प्रधानलाई उपचार खर्चका लागि लाखौंको चिठ्ठा नै पर्‍यो । कांग्रेस नेता प्रधान मुटुरोगबाट पीडित छन् । ७ वर्षअघि हृदयघात भएपछि दुई दिनसम्म अचेत भएका थिए प्रधान । त्यतिबे...
धनाढ्‍य प्रधानलाई, प्रधानमन्त्रीले किन दिए ५० लाख ?
माघ २८, २०७४ काठमाडौं - उपचार खर्च अभावमा धेरै नेपालीको सानो रोगका कारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । धेरै नेपाली एक एक रुपैयाँ जुटाउन सडकमा 'भिख' मागिरहेका भेटिन्छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।सरकारले थोरै मात्र उपचार खर्च व्यवस्थितरुपमा सर्वसाधरणलाई वितरण गर्न सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने अवस्था छ । तर, बाहिरिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूकहाँ पहुँच बनाउने र आफ्ना आसेपास...
माघ २६, २०७४ , काठमाडौँ — कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको पहिलो सर्त नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन प्राप्त हुंँदैन । त्यसैले सुशासन प्राप्त गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक दबाउनैपर्छ । यस कार्यको लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका इमानदार बन्नैपर्छ । यसै सन्दर्भमा कालो धनलाई सेतो धन बनाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । नेपालका नवधनाढ्य अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको अर...
२० माघ २०७४, वीरगन्ज – वीरगन्ज महानगपालिका कार्यालयमा १० करोड रूपैयाँ कर नतिर्ने नेकपा एमालेमा आबद्ध व्यवसायी बसरुद्दीन अन्सारीले प्रदेश राजधानीलाई एक करोड ६५ लाखको गाडी उपहार दिने घोषणा गरेका छन्। अन्सारीले वीरगन्जलाई प्रदेश दुईको राजधानी बनाए गाडी उपहार दिने घोषणा गरेका हुन्। वीरगन्ज भेंडियाहीस्थित नेशनल मेडिकल कलेजको प्रबन्ध निर्देशक रहेका उनले एकातिर वीरगन्ज महानगरको ठुलो रकमको कर बक्यौता राख...
रिक्सा चढ्नुभन्दा अब प्लेन चढ्नै सस्तो
२१ माघ, काठमाडौं । भनिन्छ हवाई जहाजको यात्रा सबैभन्दा महंगो हुन्छ । त्यसैले आम सर्वसाधारणको यात्राको माध्यम सार्वजनिक बस, ट्याम्पु, ट्याक्सी वा अटोरिक्सा हुने गर्दछ । यदि कसैले तपाईंलाई रिक्सा चढ्नुभन्दा प्लेन चढ्न सस्तो हुन्छ भन्यो भने तपाईं ठान्नुहुन्छ, यो मान्छे बहुलाएछ । तर, भारतका एक नागरिक उड्डेयन मन्त्रीले नै रिक्सा चढ्नुभन्दा प्लेन चढ्न सस्तो हुने दावीसहित गणितीय तथ्यांक नै पेस गरेका छन् ।...
२० माग २०७४, काठमाडौं - प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनयता आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। निगमले गरिरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारले पनि चासो देखाएको छैन। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि सामान्य दरले वृद्धि हुँदा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै मूल्य बढाएको दाबी गरिरहेको छ। निर्वाचनयताको करिव दुई...
१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा सबैभन्दा बढी निर्भर मुलुक बनेको छ । सन् २०१६को तथ्यांकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको देखिएको हो । अन्य मुलुकले भने रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेको देखिएको छ । नेपाल भने कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको प्रतिशत निरन्तर बढाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । सेवा अर्थात...
जनप्रतिनिधिका आँखा पैसामै
१४ माघ २०७४, दाङ स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि योजना तर्जुमा गर्न लमही नगरपालिकाको नगरसभा बस्यो । नगरपालिका क्षेत्रको विकास–निर्माणसंगै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको नगरसभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा के, कति भन्ने प्रश्न पनि उठाइयो। योजना तर्जुमा समितिले मेयर, उपमेयरदेखि वडाअध्यक्षसम्मको मासिक तलब र सुविधा तोकेरै प्रस्ताव गर्याे। केही जनप्रतिनिधिले जायज नभएको भन्दै विमति राखे पनि सान...
५ माघ २०७४, काठमाडौं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको जिर्णाेद्धार एवम् पुन-निर्माण गुरुयोजना तयार पार्न सहयोग गर्ने भएको छ । एनआरएनए र कमलामाई नगरपालिकाबीच गुरुयोजना तयार पार्न बिहीबार राजधानीमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट र नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्रीले हस्ताक्षर गरे । एनआरएनएले ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको पुन-निर्माण गुरुयोजना आगामी ६ महिनाभि...
२८ पुस, काठमाडौं । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले कास्कीको पोखरा-लेखनाथ महानगरस्थित बेगनास तालमा पम्प स्टोरेजको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन जनवरीसम्ममा प्रकाशित गर्ने जाइकाको योजना छ । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर एक सयदेखि तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको ...